Fidinana ifotony notanterahin’ny mpiasan’ny Sampandraharaha misahana ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaràm-pahefana avy amin’ny Antenimierandoholona tao amin’ny Kaominin’Andranomanelatra. – Sénat de Madagascar
Fidinana ifotony notanterahin’ny mpiasan’ny Sampandraharaha misahana ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaràm-pahefana avy amin’ny Antenimierandoholona tao amin’ny Kaominin’Andranomanelatra.
March 11, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
Nidina ifotony nanao fanadihadiana tany amin’ny Kaominina Andranomanelatra, Distrikan’Antsirabe ireo mpiasa eo anivon’ny Sampandraharaha misahana ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaràm-pahefana avy ao amin’ny Antenimierandoholona, izay notarihin’ny Talen’ny fitantanan-draharaha miandraikitra ny Fitsinjaram-pahefana Andriamatoa RANDRIANAMBININA Christiansenn Robert ny Zoma 1 martsa 2019 lasa teo.
Ny Loholon’i Madagasikara RAMPARISON Luc no nisolo tena ireo Loholona avy amin’ny Faritra Vakinankaratra iny sy ny Mpanolotsain’ny Filohan’ny Antenimierandoholona izay niatrika tanteraka ny fampiharana ny fiofanana noratovin’ireo mpiasan’ity Sampandraharaha misahana ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaràm-pahefana ity tany amin’ny Kaominin’Andranomanelatra, Distrikan’Antsirabe.
Nandritra ny fanadihadiana izay nataon’ireo mpiasan’ny Antenimierandoholona no nahafantarana fa Kaominina manana ny maha izy azy ity Kaominin’Andranomanelatra ity eo amin’ny lafin’ny toe-karena, izay ahitana Fokontany 14 sy mponina miisa 41 149 eo ho eo ary Fambolena sy fiompiana avokoa no fotom-piveloman’izy ireo.
Misedra olana ihany anefa ny Kaominina, eo amin’ny lafin’ny tsy fahampian’ny fitaovana, ny tsy fahampian’ny famatsiana ara-bola, ny tsy fahampian’ny famatsiana herin’aratra ary ny tsy fandriam-pahalemana, ka matetika dia ny Volan’ny Kaominina madiodio sy fiaraha-miasa amin’ny Vahoaka no nanatanterahana ireo fotodrafitr’asa fampandrosoana maro any an-toerana toy ny fanaovana Sekoly, tetezana, lala-kely manerana ny Kaominina. Velon-taraina araka izany izy ireo ka nangataka amin’ny Loholona ny mba hijerena izany akaiky.
Nomarihin’ny Talen’ny fitantanan-draharaha miandraikitra ny Fitsinjaram-pahefana Andriamatoa RANDRIANAMBININA Christiansenn Robert fa zava-dehibe ho an’ny Sampandraharaha ny fisian’izao fidinana ifotony izao satria manampy tanteraka ny Loholona sy manamaivana ny fanomanan’ny Loholona ny antontan-kevitra sy ny olana ho entina eny anivon’ny Fivoriamben’ny Antenimierandoholona.
Zava-dehibe sy tena ilaina ny fidinana ifotony tahaka izao natao izao hoy ny Loholon’i Madagasikara RAMPARISON Luc ahafahana mamantatra ireo olana sedrain’ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana rehetra.
Ho fanomanana ny fiatrehana ny Fivoriana ara-potoana Voalohany eto amin’ny Antenimierandoholona atsy ho atsy, dia vonona tanteraka ny eo anivon’ny Sampandraharaha misahana ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaràm-pahefana hanatanteraka ny hetahetan’ireo Loholon’i Madagasikara rehetra mba ahafahana mampandroso mirindra, mitovy ary maharitra ireo Kaominina rehetra manerana ny Nosy, satria raha mandroso ny Kaominina dia mandroso Madagasikara.